Soo Iibso lidka lidka-lugaha & Ka-saar Wareegyada Madoow ee Indhoolayaasha Indhaha Hyaluronic - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Laab-luuqa Ka-hortagga & Ka-saar Wareegyada Madoow ee Qalabka Indhaha ee Hyaluronic Acid
Color Algae Cagaaran Vitamin C Peach cusub Madow Madow Hyaluronic retinol
Shiinaha / Algae Cagaaran Shiinaha / Vitamin C Shiinaha / Fiiq Fresh Shiinaha / Caviar Madoow Shiinaha / Hyaluronic Shiinaha / Retinol
Laab-luuqa Ka-hortagga & Ka-saar Wareegyada Madoow ee Qalabka Indhaha ee Hyaluronic - Shiinaha / Algae Cagaaran gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Retinol, Black Caviar, Hyalur, Vitamin C
Feature: Anti-Puffiness, Circle Dark, Qoyaanka, Anti-Gabowga, caddeynta
Lambarka Shahaadada: 267865489
Nooca: Taxanaha Maskaxda-Hydro-Gel
Tirada alaabta: 60pcs
Miisaanka Xidhmada: 170g (+/- 5%)
Cabbirka baakadka: 80mm * 80mm * 42mm (Dulqaad ka yar 2mm)
Saameyn: Si wax ku ool ah u siman khadadka ganaaxyada, cagaha cagaha, iyo wareegyada mugdiga ah.
Maaskarada indhaha ee Hyaluronic Hydra-Gel: Maaskarada indhaha ee Hyaluronic hydra-gel waxaa ku jira maaddooyinka yaryar ee hyaluronic acid. Waxay dhex dhex martaa qanjirka 'stratum corneum', si deg deg ah ayey u dhex gashaa, si qoto dheer u qoysaa, waxay ka saartaa xag-jirrada xorta ah, waxay kobcisaa dib-u-cusbooneysiinta unugyada, waxay kordhisaa dabacsanaanta maqaarka, waxay yareysaa laalaabka, gabowga.
Maaskarada Indhaha ee 'Retinol Hydra-Gel Eye': Si wax ku ool ah u siman khadadka ganaaxa, cagaha cagaha, iyo boorsooyinka habeenno badan oo hurdo la'aan ah. Ka dhig maqaarkaaga in dib loogu celiyo maqaarka qoyan, buuran ee dhalinyarada. Indho daal iyo hurdo-u ekaansho dambe uma muuqdaan. Isku-buuqsanaanta, duuduubnaanta, iyo wareegyada madow ayaa dhammaaday.
Maadada Faytamiin C Hydra-Gel Eye: Faytamiinkan Vitamin C Hydra-Gel wuxuu ka kooban yahay Vitamin C oo soo celin kara midabkii la beddelay, baabi'in kara melanin, maqaarkana caddeyn kara.
Maaskarada Indhaha ee loo yaqaan 'Black Caviar Hydra-Gel Eye': Maaskarada indhaha ee madow ee loo yaqaan 'Black Caviar Hydra-Gel' waxay ka kooban tahay borotiin, nucleic acid, fiitamiinno biyaha ku milma, macdano, iwm. Qaab dhismeedka unugyadiisu waxay la mid yihiin qaab dhismeedka maqaarka dadka oo si fudud ayaa maqaarku u nuugaa, kordhinta dabacsanaanta maqaarka.
Green Algae Hydra-Gel: Maaskaradaas indhaha ee Algae Hydra-Gel waxay ka kooban tahay kolajiin, Waxaa loo isticmaali karaa inay tahay xarun ka hortagga gabowga si loo ilaaliyo loona xoojiyo xuubka unugyada iyadoo laga hortagayo waxyeellada soo gaadha amino acids-ka maqaarka.
Fresh Peach Hydra-Gel: Maaskarada isha cusub ee Hydra-Gel waxay ka kooban tahay Peach Ceramide waxay hagaajin kartaa qallaylka maqaarka, saxarada, qallafsanaanta, iyo xaaladaha kale.
Nadiifi oo qalaji wajigaaga.
Dhig balastarka isha hoosteeda.
Adeegso 2-3 jeer usbuucii, Xiro qiyaastii 30 daqiiqo.
Ka qaad balastarka, Ha dib u isticmaalin.